Igbo, John: Lesson 090 - Ịnọgide na Kraịst na-amị mkpụrụ dị ukwuu (Jọn 15:1-8) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 090 (Abiding in Christ)
1 Mu onwem bu ezi osisi vine, Nnam bu kwa onye-ọlu-ubi. 2 Alaka ọ bula nimem nke nādighi-amị nkpuru, ọ nānapu ya. Alaka ọ bụla nke na-amị mkpụrụ, ọ na-agbapụ, ka o wee mịa mkpụrụ.
Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya rịdatara mgbe ha risịrị nri abalị site n'Ugwu Nsọ ahụ na-agafe n'ọnụ ụzọ ámá nke mgbidi obodo ahụ na ndagwurugwu Kidron na ịrịgo Ugwu Oliv site na ubi vaịn. Ka ha na-aga, Jizos ghọtakwara ihe okwukwe ha pụtara nye ndị na-eso ụzọ ya na nzube nke ịhụnanya ha, jiri osisi vaịn mee ihe atụ ka ha na-agafe.
Jizọs kọwara Chineke dị ka onye ọrụ ubi vaịn nke kụrụ osisi vine n'ụwa nile. Otu n'ime ndị a bụ ndị Agba Ochie, ka anyị na-agụ n'Abụ Ọma 80:8-16, na Aịsaịa 5: -7. Chineke adighi iwe n'ihi osisi vine a dika opaghi mputa mkprobi.
Ya mere, Chineke kuru igba ogwu ohuru n'ime ala, Okpara ya, nke amuru site na Mo Nso, ka o we buru ezi vine, ma weputa ohuru ohuru na ohuru ohuru nke ga adi nma, ka ha me nkpuru nkpuru ime mmuo. Okwu nke Jizos kwuru nye ndi naeso ya bu nkpuru nke Mo Nso nime madu, nkpuru nke nkpuru obi nke ime mmuo. Ọ maara na nkuzi ụmụ mmadụ bụ aghụghọ - anụ ọhịa na-ebi n'ime mmadụ na-echere onye ga-eme ka ọ zọda ndị ọzọ ma rie ha. Jizọs kwuru nke a n'oge mmalite nke nkuzi ya, na ọ bụ nanị ya na-amị mkpụrụ ndị a nabatara n'ihu Chineke, ọ bụkwa onye na-eme udo na onye wuru Chọọchị.
Jizos buru uzọ gosiputa ihe di nma nke ihe omuma a, na onye nemeghe ihe n'adighi nma, ma obu weputa nkpuru ime mmuo ma we ekwe ka ome nke ihe uto di nma site na vine nye onwe ya - Chineke gebipu ya osisi vine ahụ dịka alaka ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na Chineke ahụghị mkpụrụ nke Oziọma ahụ n'ime gị, maọbụ hụghị ọnwụ nke Kraịst na nbili ya n'ime gị dịka mmetụta na nsapụta, Ọ ga-ebipụ gị na osisi vaịn Ọkpara Ya.
Otú ọ dị, ozugbo Ọ na-ahụ ihe ọṅụṅụ nke Mmụọ Nsọ, Ọ ga-eguzobe ihe ịrịba ama nke uto n'ime gị, dịka alaka na osisi vaịn. Ọ ga-abịa akwukwo ma mebie. Onye ọrụ ubi vaịn ga-ebipụ akụkụ ndị ahụ na-abaghị uru ka i wee nwee ike ịmịkwuo mkpụrụ. Nkpuru a abughi nke gi, kama Kraist no nime gi. Anyị bụ ndị ohu na-abaghị uru, ọ bụ ha niile. Ị maara na a chọrọ ka osisi vaịn dị ọcha n'oge mgbụsị akwụkwọ ọ bụla, iji mịa mkpụrụ buru ibu n'afọ ọzọ? Chineke n'onwe ya na-ebipụkwa mmejọ niile nke mmadụ, ka isi ike gị wee gwụ, ị ga-anwụkwa na mmehie. Ya mere, ndu nke Kraist nime gi ka agiri ime ka aghota ya. Onyenwe anyi nwere otutu uzo iji zoputa gi onwe gi. Ihe omume, ọdịda na ọrịa ga-awakpo gị imebi gị. Adịla ndụ maka onwe gị kama n'ime Onyenwe anyị; ị ga - abụ onye na - ahụ n'anya site n'ike ya.
3 Ugbua a dichala gi ọcha n'ihi okwu nke m gwara gi. 4 Nọgidenụ n'ime m, mụ onwe m n'ime unu. Dịka alaka ahụ anaghị enwe ike ịmị mkpụrụ n'onwe ya, ọ gwụla ma ọ na-anọgide n'osisi vaịn, ya mere ị gaghịkwa enwe ike, ọ gwụla ma ị nọgidere n'ime m.
Jizọs na-akasi gị obi. Chineke agaghị ebipụ anyị Vine ahụ n'ihi nrụrụ aka anyị na ọtụtụ mmehie. Jisos nyere onye ọ bụla n'ime anyị nchacha nke ọma na mbido, na-eburu anyị na nke a mgbe anyị kwenyere. Ekwula, sị, "Anyị ga-eme n'ọdịnihu ka anyị dị ọcha site n'ememe na ụdị ekpere anyị." O mere ka anyị dị ọcha; ọ bụ onye ahụ gbaghaara anyị otu ugboro maka ihe nile ma gbapụta anyị n'obe. Oziọma ahụ na-eme ka ọ dị ọcha. Ya mere, ọ bụghị mgbalị anyị ma ọ bụ nhụjuanya anyị ma ọ bụ ntozu okè anyị na-eme ka anyị dị ọcha ma ọ bụ naanị okwu Chineke. Dika Onye kere kere uwa site na mbu site na okwu, otua ka Kraist neme ka ayi di ocha, ma oburu na ayi emeghe okwu ya. Ọ bụghị sacrament nke baptism ma ọ bụ nri anyasị Onyenwe anyị nke na-eme ka anyị dị ọcha, kama okwukwe na okwu Jizọs na ntụgharị uche miri emi na ya. Na-agụ ma ọ dịkarịa ala akụkụ ụfọdụ nke Akwụkwọ Nsọ kwa ụbọchị, ọkacha mma na oge oge, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nri ime mmụọ, ị ga-ada.
Jizọs lekwasịrị anya n'otu okwu nke uto na mkpụrụ osisi anyị na-adabere. Nke ahụ bụ ỊDỤ. Okwu a na-egosi ugboro iri na Isi nke 15. Ọtụtụ nkọwa nwere ike ịpụta site na okwu a - anyị na-anọ na ya na ya n'ime anyị; a na-edo anyị nsọ dị ka ndị dị nsọ; ike ya na mmiri ya na-agafe na anyị. Ihe niile si n'aka ya bia ka anyi wee biri na ya. Ọ bụrụ na anyị esi n'ebe ọ nọ pụọ, mgbe ahụ, mmetụta nke ike ịhụnanya ya na-akwụsị n'ime anyị. Ọ bụrụ na agbajisịrị alaka ụlọ, ọbụna maka oge, ọ ga-akpọnwụ. Lee nkọwa jọgburu onwe ya nke ụka na-akpọnwụ akpọnwụ. Ekpere dị oké mkpa maka ndị kwere ekwe bụ ịrịọ ka anyị nọgide na ya, site na ya, Onyenwe anyị nwere ike ịrụ ọrụ n'ime anyị mgbe nile maka ibu, mkpụrụ osisi na omume, ma debe aha anyị n'abalị na ehihie.
Ịnọgide abụghị nke anyị, ọ bụ amara nke Mmụọ Nsọ. O nweghi onye nwere ike iguzo na onwe ya nime Kraist, ma anyi nwere ike ikele ya maka onyinye a ma gwa ya ka o debe anyi ka ndi ozo wee biri.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, ị bụ mmanya dị nsọ nke Chineke n'ala anyị. Site na gị anyị na-enweta ezi àgwà niile. Obi anyi bu ihe ojoo. Anyị na-ekele gị na i meela ka anyị dị ọcha site n'Oziọma ahụ. Debe aha gị, ka ike nke Mmụọ Nsọ gị wee nwee ike ịmị mkpụrụ ịhụnanya mgbe niile. Anyị enweghị ike ime ihe ọbụla na-enweghị gị. Mee ka umunne anyi guzosie ike ka ha ghara ibi ndu n'ihi onwe ha n'adighi ike, kama ka ha no n'ime unu.
Olee otú Jizọs si bụrụ ezigbo Vine?